China Ubushushu ubungqina pvb umboniso mveliso kunye nabenzi | IBaizan
Ubungqina bobushushu PVB
Ubungqina bobushushu be-pvb yimveliso esandula ukwenziwa yenkampani yethu. Yamkela ubuchwephesha obukhokelela kubuNano bobushushu obuphakathi kwaye yongeza ubungqina bobushushu kubungqina bokuqhushumba kunye nemisebenzi yokugquma yesandi kwifilimu yesiqhelo. Iimpawu: 1. Inqanaba lokuthintela infrared i-85% -99%, ubungqina obude bobushushu; 2. I-99% ye-ultraviolet yokuthintela izinga, ukukhuselwa lilanga, ukunqanda ukwaluphala kwendawo okanye ifanitshala; 3. Ukuhanjiswa kokukhanya okuyi-80%, okwanelisa ngokupheleleyo iimfuno zokuhambisa ukukhanya ngaphambili kunye neglasi yokwakha; 4. Ubungqina bokuqhushumba kunye nokulwa nokungena; 5. Ukuthintela isandi kunye nokuthintela ingxolo; Ukusebenza kweendleko eziphezulu, ukufudumeza ubushushu ixesha elide,
Kuqala, vula amandla ebhokisi ebilayo yamanzi kunye nokufudumeza amanzi ukuya kwi-100 ℃. Lungisa isiqwenga seglasi engama-300 * 300mm enobunzima obuyi-2mm, Beka iglasi kwigumbi lokucoca uligcine imizuzu emi-5. Yikhuphe kwaye uyibilise ngokuthe ngqo kwigumbi lokubilisa iiyure ezimbini. Emva koko yikhuphe kwaye uqaphele ukuba akukho bubble okanye mhlophe kunye nokunye okungaqhelekanga. Ukuvunyelwa kuyavunyelwa, kodwa akusayi kubakho bubbles, umbala omnyama okanye ezinye iziphene i-15 mm ukusuka emaphethelweni okanye i-10 mm ukusuka kwintanda.
Uvavanyo lokuchasana nemitha
Kukho iisampulu ezintathu ezinobungakanani be-76mm (W) * 150mm (L). Emva kokukhanya kwemitha ngokwe-GB / T5137.3-2009, ukuhanjiswa kwesampulu kwamiselwa kwakhona.
Ukuhanjiswa kokukhanya kunye novavanyo lwenkungu
Lungisa iziqwenga ezibini zeglasi emhlophe enobunzima be-2mm kunye nobungakanani be-5 × 5cm.
Beka iglasi ecocekileyo, ubeke isampuli emva koko ubeke isiqwenga seglasi, emva koko usike. Nika ingqalelo ukuthintela ukolula ifilimu ukuthintela ukuvela ngexesha lokusika, kwaye uqinisekise ukuba umda wovalo ngaphandle kweglasi umalunga ne-2mm.
Beka iglasi kwigumbi lokucoca elingama-160 ± 5 for, ligcine imizuzu eyi-15 emva koko ulikhuphe. Emva kokupholisa, yigcine phantsi kweprojektha ukubona ukuba ngaba kukho iimeko ezingaqhelekanga ezinje nge-bluing, fogging and whitening.
Le glasi ilungiswe ngentla ifakwa kubakaki beemitha zemilinganiselo, kwaye idatha efumanekayo kukudlulisa ukukhanya kunye nenqanaba lenkungu lesampulu.
Egqithileyo Uluhlaza mnyama ekukhanyeni okuluhlaza FG101
Okulandelayo: pvb ecacileyo yemoto